Akụkọ - Kedu usoro nhazi akpa akpa
Kpọọ anyị: 0531-86957756
Akpa nri plastik
Akpa na-emepụta plastik
Akpa friza plastik
Akpa ngwa nri plastik
Akpa T-uwe plastik
Akpa ebu ihe rọba
Akpa eji eji akwa akwa akwa
Bulie akpa ịzụ ahịa
Akpa Stripe Plastic
Akpa mkpofu plastik
Akpa mkpofu nke kpakpando mechiri
Akpa a na-ekpofu ahịhịa nke ejiri ewepụghị
Akpa ahịhịa ihe osise rọba
Akpa ahịhịa na-esi ísì ụtọ rọba
Akpa anụ ụlọ
Akpa rọba nwere ike imebi
EPI akpa akpa
Plastic Die Cut Handle Akpa
Akpa achịcha rọba
Ihe nkiri nkwakọ ngwaahịa polyethylene
Ihe nkiri Stretch Plastic
Ngwaahịa a na-atụfu plastik
Gloves enwere ike iwepu
Apron enwere ike iwepụ
akwa okpokoro enwere ike iwepu
Akpa Biohazard Plastic
Akpa Poly Akara Onwe
Kedu usoro nhazi akpa akpa
Akpa ahụ dị ebe niile na ndụ anyị, họrọ ụdị ụdị akpa ahụ: ugbu a ụdị akpa a na-eji n'ahịa bụ n'ozuzu nnukwu ụlọ ahịa nke a na-akpọakpa vestakpa ịzụ ahịa, a na-akpọ ụdị akpa a n'ihi na akpa nke akụkụ abụọ nke warara dị ka vest.A na-eji akpa nri a na-akpọ akpa nri, rie nri ụtụtụ ntụ ntụ ntụ ntụ, achịcha a na-esi nri bụ akpa a, na ịzụta nri n'oge a na-ebu nri;A na-eji akpa mkpụrụ osisi amị mkpụrụ;Ihe a na-akpọ nnukwu ụlọ ahịa na-ejiakpa ịzụ ahịa.A na-akpọ ndị a akpa mmiri, nke na-abụkarị ibu;E nwekwara akpa mkpofu, n'ozuzu oji, ezinụlọ, ekwentị mkpanaaka N'ogbe na-amasịkwa ijide ekwentị mkpanaaka.
Kedu usoro nhazi akpa akpa?
1. Ịzụ ihe, ịfụ ihe nkiri, ibipụta, ịkpụ, nkwakọ ngwaahịa, nnyefe, n'ezie, na nchịkọta.
2.Akpa nkwakọ ngwaahịausoro mmepụta ihe: ọ na-ewe ụbọchị 3 iji mee atụmatụ ma mee efere, 5 ụbọchị ịfụ ihe nkiri na ụbọchị 18 iji mee akpa, a na-eme atụmatụ na ọ na-ewe ihe dị ka ụbọchị 4 iji mepụta ngwaahịa, na ihe dị ka ụbọchị 30 iji wuchaa obere kabinet.
3.3.Ọnụ ọgụgụ nke akpa nkwakọ ngwaahịa: n'ihi na ịfụ ihe nkiri, na-ebipụta iji gbalịa igwe, ya mere n'ime akpa ahụ nwere ike ịbụ karịa ka ọnụọgụ nke ọnụọgụ nwere ike dị ntakịrị, n'ozuzu dịka omume nke ọnụ ọgụgụ nke ugwo.
Oge nzipu: Eprel-13-2022
North nke okporo ụzọ 350 mita ọdịda anyanwụ nke West
Ụgbọ ala mgbanaka dị n'èzí, Yucheng City,
Obodo Dezhou, Shandong Province, China
Akwukwo tebụl enwere ike iwepu
Ihe nkiri gbatịa